Abaalmarinta Komla Dumor 2020: BBC oo raadineyso xiddiga ugu wanaagsan saxaafadda Afrika - BBC News Somali
Abaalmarinta Komla Dumor 2020: BBC oo raadineyso xiddiga ugu wanaagsan saxaafadda Afrika
24 Febraayo 2020
BBC-da ayaa raadineysaa weriyaha ugu wanaagsan Afrika ee sanadkan 2020-ka si loo siiyo abaalmarinta BBC World News ee loogu magac daray Komla Dumor,kaas oo galaya sannadkii lixaad.
Weriyayaasha Afrika ku sugan ayaa codsan kara abaalmarinta oo ujeeddadeedu tahay in la soo bandhigo tayada hal abuurka saxaafadda ee Afrika.
Qofka ku guuleysta abaal marinta wuxuu fursad u helayaa inuu muddo saddex bilood ah uu ka shaqeeyo xarunta BBC-da ee London oo uu khibrad iyo xirfado cusub kasoo baran doona.
Gudbinta araajida waxay ku egtahay 16-ka bisha Maarso 2020 saacadda GMT marka ay tahay 23:59.
Abaalmarintan ayaa lagu maamuusaa Komla Dumor oo ahaa weriye u dhashay dalka Ghana oo si lama filaan ah u geeriyooday 2014 isagoo u shaqeynayay BBC-da.
Munaasabadda guddoonsiinta abaalmarinta sannadkan waxaa ay ka dhici doontaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
Waxaa la gudoonsiin doonaa weriye ku nool kana shaqeeya Afrika, kaasoo kulansaday xirfad sare oo warbaahineed, si gaar ahna uga warrama sheekooyinka qaaradda Afrika, isla markaana doonaya inuu meel sare ka gaaro mihnaddiisa.
Weriyaha ayaa sidoo kale fursad u heli doona inuu ka soo warramo qaaradda Afrika, warbixinnadiisana la gaarsiiyo caalamka.
Wariyeyaashii horay ugu guuleystay abaalmarinta Komla Dumor ayaa waxay kala yihiin:
2015: Nancy Kacungira oo u dhalatay dalka Uganda.
2016: Didi Akinyelure oo u dhalatay dalka Nigeria.
2017: Amina Yuguda oo u dhalatay Nigeria.
2018: Waihiga Mwaura oo u dhashay Kenya.
2019: Solomon Serwanjja oo u dhashay Uganda
Abaalmarinta Komla Dumor 2018 oo la furay
Weriyihii ugu dambeeyay ee ku guulaysata abaalmarinta, Solomon Serwanjja, ayaa warbixin ku saabsan la tacaalidda wasakheynta hawada ka diyaariyay magaalada Nairobi. Waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay fursadda uu helay. Serwanjja ayaa ka qeyb qaadan doona munaasabadda lagu shaacinayo weriyaha 2020 ku guulaysta abaalmarinta.
Agaasimaha BBC qeybta la hadasha dibadda, Jamie Angus, ayaa yiri: "Waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaan weriyayaasha ka faa'iideystay abaalmarinta BBC World News Komla Dumor, maadaama ay sii wadaan magaca uu ka tegay weriyahaasi iyo in wararka Afrika u fahansiiyaan caalamka kale."
"Sanad kasta, waxaan ku hanweynahay inaan soo dhaweeyo weriyaha ku guulaysta abaalmarinta, si aan uga maqlo fekradaha wanaagsan ee ay ka qabaan qaaradda, isla markaana aan ula wadaago qiyamka ammaanada iyo dhexdhexaadnimada ee lagu yaqaan BBC-da, mabaadii'daasi oo muhiim u ah dimuqraadiyadda caalamka".
Si aad u ogaato inaad u qalanto abaalmarinta, click here
Waxaa sidoo kale la wadaagi kartaa asxaabtaada caalamka adigoo adeegsanaya hashtag-ga #BBCKomlaAward.
Maxay Itoobiya u dhisaneysaa Ciidamada Badda, xageysa ka heli rabtaa saldhig badeed?
TOOS Cumar Cabdirashiid oo si dag uga ka hadlay doorashadii shalay lagu qabtay Garoowe
Maxaa ka jira in saacaddan ay saadaaliso qiyaamaha?
45 Daqiiqadood ka hor
Maxaa qabsaday weriyaha sida sarbeeban u aflagaadeeysay madaxweyne Erdogan?
Gabdhaha Muslimiinta ee u dagaalamaya inay xirtaan xijaabka oo laga hor istaagay
Muxuu yahay xalka ay heleen dhallinyarada bidaarta leh ee Itoobiya?